Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny ankamaroan'ny Brits dia mankafy firenena maro kokoa izay mandray pasipaoro fanaovana vaksiny
Miandry fatratra ny fanazavana momba ny fotoana sy ny fomba mety hahafahan'izy ireo mivezivezy iraisam-pirenena ireo mpivahiny anglisy
Ny angon-drakitra vaovao dia mampiseho fa ny 62% an'ny Brits dia manohana ny firenena maro kokoa mandray pasipaoro fanaovana vaksiny
Mifanohitra amin'izany, 26% no milaza fa hajanona amin'ny dia izy ireo raha toa ka tsy maintsy manome porofo momba ny vaksinin'ny COVID-19
77% no nilaza fa haka vola lany amin'ny fiantohana ara-pitsaboana alohan'ny handaozany an'i UK
Ny angona vaovao dia nanambara ny habetsaky ny Brits izay mieritreritra ny hanao fialantsasatra any ivelany no mankasitraka ny hevitra momba ny pasipaoro fanaovana vaksiny.
Asehon'ny fikarohana fa 62% ny Brits no manohana ny firenena maro kokoa mandray pasipaoro fanaovana vaksiny. Mifanohitra amin'izany, maherin'ny ampahefatry (26%) ny mpanao fialantsasatra anglisy no hatsahatra amin'ny fitsidihana firenena iray raha toa ka takiana izy ireo ny hanome porofon'ny vaksiny COVID-19.
Ity data ity dia tonga toy ny British ny mpitsangatsangana dia miandry fatratra ny fanazavana momba ny fotoana sy ny fomba mety hahafahan'izy ireo mivezivezy amin'ny sehatra iraisam-pirenena miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria izay maminavina ny rafi-pitantanana fifamoivoizana dia hampiharina amin'ny fandrarana ny dia hatrany amin'ny firenena mena, ny fetra voafetra ho an'ny firenena maintso, ary ny fitambaran'ny fitsapana, pasipaoro fanaovana vaksiny ary quarantine ho an'ny firenena mavo sy amber.
Ny angon-drakitra koa dia naneho fa ny 77% an'ny Brits dia hiantoka ankehitriny fa manana fandaniana ara-pitsaboana sahaza alohan'ny dia, hatramin'ny 71% talohan'ny areti-mandringana.
Mbola misy tsy fahatokisana mafy eo amin'ireo mpivahiny anglisy momba ny pasipaoro fanaovana vaksiny sy ny fitsapana hahafahana manao dia iraisam-pirenena. Ankoatry ny fiheverana ny pasipaoro fanaovana vaksiny, ny angon-drakitra koa dia naneho fa raha 67% dia vonona ny handoa ny fitsapana PCR hahafahan'izy ireo mivezivezy amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia 4% monja amin'ireo Brits no vonona handoa £ 75 na mihoatra amin'ity fitsapana ity.
Ireo manam-pahaizana momba ny indostria dia mahazo famporisihana fa olona marobe izao no handray ny saram-pitsaboana sahaza alohan'ny fivezivezena kanefa ny 23% kosa dia mbola vonona ny handeha tsy misy io fonony io. Miaraka amina lamandy mipetraka any UK amin'izao fotoana izao ho an'ireo izay mandeha tsy misy antony ara-dalàna hanaovana izany, dia zava-dehibe kokoa ny hamerenan'ireo mpiala sasatra ny torohevitra farany FCDO sy ny fepetra takiana amin'ny fidirana alohan'ny dia. Tokony hieritreritra ny hividy fiantohana fitsangatsanganana kely kokoa amin'ny datin'ny fiaingany izy ireo mba hahazoana antoka fa manana fonony sahaza ho an'ny firenena izy ireo amin'ny fotoana diany.
Ireo mpandeha mandeha any ivelany izao dia mila mitondra endrika vaovao milaza fa avela handeha amin'ny lalàm-panidiana nasionaly ny diany.